दीप च्याम्पियन « KhelkudNews.com
Published On : 19 December, 2021 6:54 am
दीप साउन प्रथम नेपाल एपीएम खुला टेबल टेनिस प्रतियोगिताको पुरुष सिंगल्समा शनिवार च्याम्पियन बनेका छन् ।
भैसेपाटीस्थित आयोजक नेपाल एपीएम टेबल टेनिस प्रा.ली. को हलमा भएको फाइनलमा दीपले एपीएफका संयोग कपालीलाई ११–७, १६–१४, ११–५, ६–११, ७–११ र ११–५ को सेटमा पराजित गरे ।
यसअघि महिला सिंगल्स फाइनलमा नेपाल आर्मीकी रविना महर्जनले आर्मीकै दिया देउलालाई ११–३, ११–४, ११–४ र ११–३ को सोझो सेटमा हराउँदै शीर्ष स्थान हात पारेकी थिइन् । सिंगल्समा शीर्ष तीन स्थान हात पार्नेले क्रमशः १० हजार, ५ हजार र २ हजार ५ सय नगद पुरस्कार प्राप्त गरे ।
पुरुष भेट्रान सिंगल्सको ४० वर्षमाथि कीर्तिपुरका जयराम महर्जन पहिलो, एनिस पिङपोङ क्लबका रक्तचन्द्र मानन्धर दोस्रो तथा गोडस्पिनका निकेनमान प्रधान र मुकेश महर्जन तेस्रो भए । ५० वर्षमाथि ललितपुर टेबल टेनिस क्लबका राजेन्द्र बज्राचार्यले स्वर्ण, ललितपुरकै राजन सुब्बाले रजत तथा खोल्छा पुखुका नदिम शाक्य र एनिसका कपुर शर्माले कांस्य जिते । ६० वर्षमाथि ललितपुरका आनन्द रत्न धाक्वा प्रथम, ललितपुरकै जग्दिश प्रसाद जोशी द्वितीय तथा एपीएमका सुमन खड्गी र ललितपुरका ध्रुवमान श्रेष्ठ तृतीय भए । यसअघि यु–१६ सिंगल्सको ब्वाइजमा न्यु हाराइजनका प्रवेश बस्नेत र र्गल्समा नेपाल आर्मीकी दिया देउला तथा मिक्स डबल्समा आर्मीका दीप साउन र स्वेच्छा नेम्वाङको जोडी विजेता बनेका थिए ।
प्रतियोगितामा समावेश आठै स्पर्धाका पदक विजेतालाई सिओम टेबल टेनिस नेपालले करिब ५ लाख रुपैयाँको खेल सामाग्री पुरस्कार स्वरूप प्रदान ग¥यो । प्रतियोगिताको ब्वाइजमा संस्कृति स्कुलका रायंश श्रेष्ठ तथा र्गल्समा एपीएमकी योङगी पौडेल उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए ।
विजेतालाई मुख्य प्रायोजक साङ्ग्रिला डेभ्लोप्मेन्ट बैङ्क लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठ, सह–प्रायोजक पूर्ण शङ्कर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष धर्ममान बज्राचार्य, आयोजक प्रा.ली. का निर्देशक दानबहादुर महता, सिओमका प्रबन्ध निर्देशक ज्याकी महर्जनलगायतले एक कार्यक्रमबिच पुरस्कृत गरे । तीन दिने प्रतियोगितामा ३ सय ५० खेलाडी सहभागी थिए ।